Calaamadee 2019: ka soo horjeeda kuwaa ka soo horjeeda lafiirtanka Indomitable waxay difaaci doonaan magacooda? - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » SPORTS Calaamadee 2019: ka soo horjeeda kuwaa ka soo horjeeda lafiirtanka Indomitable waxay difaaci doonaan magacooda?
Calaamadee 2019: ka soo horjeeda kuwaa ka soo horjeeda lafiirtanka Indomitable waxay difaaci doonaan magacooda?
Waxay ku taallaa meel qaali ah, lugta caanka ah ee Pyramids iyo Sphinx ee ku yaala Giza, taas oo ka dhici doonta habeenimadii jimcaha ee tartanka Koobka Afrika ee Wadamada 2019. Midabka casaan ee mid ka mid ah toddobada yaabab ee adduunka oo arki doona kooxahan 32e Koobka tartanka kubada cagta Afrika.
Dhowr saacadood ka hor xafladda ayaa waxaa marti gelin doona Masraxa Masraxa ee Masaarida, Mariam Amin, shaqaalaha ka shaqeeya gudaha dhul-beereedka ayaa nadiifin doona marxaladda ugu muhiimsan si munaasabadda looga dhigo mid cajiib ah. Kooxaha wax soo saarka ayaa sidoo kale si adag u shaqeynaya si ay u helaan wax kasta oo diyaar u ah si loo xaqiijiyo muuqaalkii ugu fiicnaa ee munaasabadda tartanka kubada cagta ee ugu weyn Afrika.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.camfoot.com/actualites/tirage-au-sort-de-la-can-2019-contre-quels-adversaires-les-lions,29797.html
CAN 2019: Saaxiibayaal u dhexeeya sugitaanka iyo nasashada ka hor barashada
Exclusive: Cameroon waxay qabanqaabin doontaa Chan2020